Mpirakidraharaha amerikanina: “Tsy mahazo mifidy ny anarana miverina” | NewsMada
Mpirakidraharaha amerikanina: “Tsy mahazo mifidy ny anarana miverina”
“Amin’izao andron’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany eto Madagasikara izao, miarahaba ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana lehibe eo amin’ny fiainam-pirenena izao mba hanajana ny dingana amin’ny demokrasia milamina izao izahay.“
Io ny fanambaran’ny mpirakidraharaha amerikanina, i Stuart Wilson, omaly, tamin’ny nanatanterahana ny fifidianana. I Etazonia dia manohy hatrany ny fankaherezana amin’ny dingana amin’ny fifidianana azo antoka, marina, mangarahara ary tsy manavaka.
Raha ny omaly, ho famenoana ny fanampiana ny enti-manana ny fifidianana ao amin’ny Sacem, mbola eo anilan’ny vahoaka malagasy hatrany amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana ry zareo. Izy manokana, nitsidika birao fandatsaham-bato maro niaraka tamin’ny mpiara-miasa amin’ny avy amin’ny iraka amerikanina.
Nankahery ireo mpifidy ho tonga maro amin’ny fandatsaham-bato izy mba hamitany ny adidin’ny olom-pirenena ary maniry soa ho an’ireo kandidà rehetra.